Asingabheki izinhlelo ezinkulu eziba sematheni kuphela uma sikhuluma ngengqalasizinda, kuloba uBusi Mavuso - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
Asingabheki izinhlelo ezinkulu eziba sematheni kuphela uma sikhuluma ngengqalasizinda, kuloba uBusi Mavuso
KUBE nezindaba ezinhle ezithinta izinto ezimbili iBusiness Leadership South Africa (iBLSA) ekade izilwela – ezokuvakasha nokutshala imali kwingqalasizinda. Kunenqubekalaphambili kukona kokubili kodwa osomabhizinisi kufanele balwele okungaphezu kwaloku.
Umonakalo omkhulu owenziwe yiCOVID-19 ushaye imboni yezokuvakasha neyezindawo zokudlela. Ngenxa yokuwa kwezokuvakasha emhlabeni, le mboni iswele amakhasimende. Lena ngenye yezimboni ezimqoka njengoba iqashe abantu abawu-1.5 million, iningi labo okungabantu abangenamakhono atheni futhi okungabesifazane.
I-SA Tourism ilinganisa ukuthi u-87% wabantu abaqashwe kule mboni ngabaqhamuka emakhaya aswele. Ngakho kubalulekile ukuthi senze konke okusemandleni ukuyivuselela igcine isiphinde iba ngenye yezimboni ezizokhulisa ukuqashwa kwabantu.
Isinqumo se-UK sokukhipha iNingizimu Afrika ohlwini lwamazwe akwi-red list sifike emva kwendaba kodwa siyasamukela. Sisho ukuthi abazohambela e-UK besuka eNingizimu Afrika ngeke kusadingeka bakhokhele ukuthi uma befika kuleliya zwe bake bagoye ehhotela likahulumeni izinsuku eziwu-10 bengaxhumani nabanye abantu. Loku bekuphazamisa izivakashi eziqhamuka e-UK, nokuyiyona makethe yethu enkulu yezivakashi zaphesheya.
I-BLSA iyakwamukela lokhu. Sike sabhalela uNdunankulu wase-UK uMnu uBoris Johnson simkhombisa umphumela omubi wokusifaka kulolu hlu entuthukweni ye-Afrika eseNingizimu nasebudlelwaneni bamabhizinisi phakathi kwala mazwe womabili. Lolu shintsho manje luzokwenza ukuthi abantu bakwazi ukuhamba ngendlela ejwayelekile ukuze kuphinde kuqhubeke ukuhwebelana nelinye lamazwe esihwebelana nawo kakhulu.
Lolu shintsho lufike emva kwendaba kodwa mhlawumbe sisekhona isikhathi sokuthi lusize ngamaholidi kaDisemba, nokuyisikhathi lapho abahlala emazweni afana no-UK noma lawa okuthiwa ase-northern hemisphere besuke bebalekela ubusika.
Kuzobaluleka kwinqwaba yamabhizinisi ephoqeleke ukuthi ivale ezinyangeni eziwu-18 ezedlule ukuthi abe nesizini engcono. Ngilindele ukuthi manje sande isibalo sabantu ababekisa indawo njengoba kufanele izivakashi zaseBritain zilisebenzise leli thuba elisha.
Ukhiye uzoba sekutheni izokwazi kangakanani le mboni yezokuvakasha eshayekile ukuvuka izithathe. Uhulumeni uvame ukukhuluma ngezindlela zokweseka abantu njengoba kuqhubeka ubhubhane iCOVID-19 kodwa lolo sizo oluncane olwenziwa ngokusebenzisa isikhwama iTourism Equity Fund lusamile ngenxa yecala elafakwa.
Sidinga ukwenza okuthe xaxa ukweseka amabhizinisi avuke kanti amabhizinisi amakhulu azofuna ukubambisana nohulumeni emizamweni yokwenza loko.
Ake ngishintshele kolunye udaba olumqoka emnothweni wethu; ingqalasizinda. Ngesonto elidlule bekukhona omunye umhlangano futhi, i-Sustainable Infrastructure Development Symposium, obubizwe wumengameli. Kube khona izimemezelo ezijabulisayo zezinhlelo zengqalasizinda ezizokwenziwa wuhulumeni nabemboni ezimele, okubalwa kuzona naleyo onhloso yayo wukukhulisa ukukhiqiza izinto ezisebenzisa i-hydrogen ngendlela eyonga imvelo, phecelezi i-hydrogen economy.
I-BLSA sekunesikhathi iyisishoshovu sokuthi akutshalwe kwingqalasizinda futhi kade sixoxisana nohulumeni ngokuthi yini esingayenza ukuweseka ukuze kuzokwanda abatshalimali kwingqalasizinda.
Yize zizinhle izinhlelo ezinkulu ezifana nalezi okubhungwe ngazo emhlanganweni nomengameli kodwa ngiyakhathazeka ngokuthi asikhulumi ngokwanele ngokutshala imali kwingqalasizinda iyonke. Izigidigidi ezimbalwa zinhle kodwa okungaba ngcono kakhulu wukuthi izinkulungwane zezinkampani zitshale ekuthuthukiseni ingqalasizinda yazo.
Loku kumele kubonakale nakuhulumeni, kumele kube nezinhlelo eziningi zokuthuthukisa ingqalasizinda okumele ngabe ziyaqhubeka, ikakhulukazi kohulumeni bezindawo kunezinhlelo ezimbalwa ezinkulu eziqhakanjiswayo.
Izinhlelo eziningi ezincane yizona ezasiza ukuqopha amarekhodi okutshalwa kwemali kwingqalasizinda ngo-2007. Ukuze sibuyele lapho ngale kwalezi zinhlelo ezinkulu, kumele kube khona okuthe xaxa esikwenzayo ukuze izwe lethu lihehe abatshalimali. Loku kungenzeka kuhulumeni ngokuphucula imithetho eyijoka esetshenziswayo yokuqasha abazohlinzeka uhulumeni ngomsebenzi njengokusebenzisa izivumelwano zokubambisana phakathi kukahulumeni nabemboni ezimele, ama-public private partnership.
Imboni ezimele idinga ukuthi izinkampani zikhululwe ukuthi zitshale imali. Isibonelo esihle saloku wukubuyekeza i-Electricity Regulation Act, nevumela izinkampani ukuthi zikwazi ukuzikhiqizela ugesi owu-100MW ngaphandle kwelayisensi.
Ukudedela i-spectrum nako kungenza abemboni yezokuxhumana ngobuchwepheshe nezinye izimboni ezincike kuyona batshale imali emnothweni.
Ukwenza ukuthi izwe lethu libe yindawo edoba abatshalimali kumqoka, hhayi nje izinhlelo ezinkulu kuphela eziba sematheni. I-BLSA izoqhubeka nokusebenzisana nohulumeni ukuweseka ngamakhono nangamacebo okuthi kungenziwa kanjani.
Kumele senze kube lula ukuba nebhizinisi. Loku yinto noNgqongqoshe wezeziMali uMnu u-Enoch Godongwana ayishilo ngenkathi ekhuluma kwi-Sunday Times Investment Summit ngesonto eledlule.
Sibubonile ubufakazi bokubuyekeza ukuphatha izimali eNingizimu Afrika njengoba ngekota yokuqala kube nemali engaphezu kwebilindelekile, nobekuqala kusukela ngo-2018. Loku kuhle futhi kubalulekile ngoba kuzolekelela ukubuyisa isithunzi somNyango wezeziMali, nesidicileleke phansi kule minyaka edlule.
Nakuba le mali ethe xaxa izosiza kodwa lesi akusona isikhathi sokudembesela. Osomnotho bathi imvamisa kuthatha iminyaka eyisikhombisa ngaphambi kokuthi izwe likwazi ukusuka ekuklelisweni endaweni eyenza abatshalimali babemanqikanqika, phecelezi i-sub-investment grade credit rating. Loku kukleliswa kusho ukuthi maningi amathuba okuthi uma uboleka imali ungase ungakwazi ukuyikhokha.
KUHLE kwesinye isikhathi ukuthi yakhele ngamaqubu enye, kuloba uNtokozo Biyela.
Ulwazi aluthekele kunina lumsize wasungula inkampani yezinto zokuhloba zesiNtu. Uxoxe noTEBOGO MOKWENA